1. ရေနံထုတ်ယူမှု၊ ရေနံသန့်စင်မှု၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်း၊ ရေနံတင်သင်္ဘောနှင့် စစ်ဘက်လုပ်ငန်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ စပါးသိုလှောင်မှုနှင့် သတ္တုလုပ်ငန်းစသည့် အခြားသော မီးလောင်လွယ်သော ဖုန်မှုန့်များဖြစ်သော အခြားမီးလောင်လွယ်သော ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။
1. အလူမီနီယံသတ္တုစပ်ခွံကို သွန်းလုပ်ခြင်း၊ အသေပုံသွင်းခြင်း၊ မျက်နှာပြင်ဖျန်းခြင်း၊ လှပသောအသွင်အပြင် သို့မဟုတ် သံမဏိဖြင့် ဂဟေဆော်ခြင်း၊ ပွတ်ထားသော မျက်နှာပြင်၊
3. လျော်ကြေးပေးစက်ကို လိုအပ်သလို တပ်ဆင်နိုင်သည်။
1. ပုံမှန်ရွေးချယ်ရန် မော်ဒယ် သက်ရောက်မှု၏ စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ၊ မော်ဒယ်၏ သက်ရောက်မှုနောက်ကွယ်တွင် Ex-mark ကို ထည့်သွင်းသင့်သည်။နမူနာပုံစံသည် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်- ထုတ်ကုန်မော်ဒယ်အတွက် ကုဒ် +Ex-အမှတ်အသား။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 400W IIC ပါရှိသော အလူမီနီယမ်အလွိုင်း၏ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ဖိအားမြင့်ဆိုဒီယမ်မီးခွက် လိုအပ်သည်၊ တပ်ဆင်မှုမှာ D အမျိုးအစားဖြစ်သည်။မော်ဒယ်၏သက်ရောက်မှုမှာ "BAL-N400L+Exd IICT4 Gb+20" ဖြစ်သည်။
2. အချို့သော အထူးလိုအပ်ချက်များရှိပါက၊ ၎င်းကို အမိန့်စာအဖြစ် ထောက်ပြသင့်သည်။
ယခင်- PBb စီးရီး အပြုသဘောဆောင်သောဖိအား ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ ဖြန့်ဖြူးရေးဘုတ်အဖွဲ့
နောက်တစ်ခု: BS51 စီးရီး ပေါက်ကွဲခြင်း-ခံနိုင်ရည်ရှိသော ဓာတ်မီး
Blast Proof မီးများ
Explosion Proof Led မီးများ
Explosion Proof Led အလုပ်မီးများ
Model Implication Features 1. အပြင်ဘောင်ကို အင်ဂျင်နီယာ ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး ဖောက်ထွင်းမြင်ရသည့် အဖုံးကို polycarbonate ဖြင့် ဆေးထိုးပုံသွင်းထားပြီး LED အလင်းရင်းမြစ်ကို တည်ဆောက်ထားပြီး အလေးချိန် ပေါ့ပါးပြီး အသုံးပြုရအဆင်ပြေစေပါသည်။2. ပြင်းထန်သောအခြေအနေအမျိုးမျိုးအောက်တွင် မီးအိမ်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောလည်ပတ်မှုကိုသေချာစေရန်အကာအရံတွင် IP66 အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ရှိသည်။3. မီးအိမ်၏ရှေ့ဆုံးတွင် 360° လှည့်နိုင်သော stainless steel ချိတ်တစ်ခု ပေးထားသည်။4. ပေါ့ပါးသော၊ ပေါ့ပါးသော၊ ခရီးဆောင်၊ တွဲလောင်းနှင့်...
မော်ဒယ်၏ သက်ရောက်မှု အင်္ဂါရပ်များ 1. အလူမီနီယမ် အလွိုင်းသတ္တုစပ် အခွံ၊ ဖိအားမြင့် အီလက်ထရောနစ် ဖြန်းဆေး၏ မျက်နှာပြင်။2. တောက်ပမှုမြင့်မားသော LED အလင်းရင်းမြစ်၊ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းသော၊ မြင့်မားသောတောက်ပမှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုလိုအပ်ချက်များကို ထိရောက်စွာဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း 3. Built-in ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ Ni-MH ဘက်ထရီထုပ်ပိုး၊ အလိုအလျောက်အားသွင်းခြင်း၏ ပုံမှန်အလုပ်၊ ပါဝါ၊ ပျက်ကွက်သည် 90 မိနစ်အရေးပေါ်ပါဝါထောက်ပံ့နိုင်သည်။4. ပင်ကိုယ်ဘေးကင်းသောဆားကစ်၏ အထူးဒီဇိုင်းဖြင့်...
Model Implication Features 1. Aluminum alloy die-casting shell, မျက်နှာပြင်ကို လျှပ်စစ်ဖြန်းထားပြီး ပုံပန်းသဏ္ဌာန် လှပသည်။2. အသိဉာဏ်မှိန်မှိန်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်၊ လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် စောင့်ကြည့်ထားသော အကွာအဝေးအတွင်း ရွေ့လျားပြီးနောက် သတ်မှတ်တောက်ပမှုအတိုင်း လူ့ခန္ဓာကိုယ်သည် ရွေ့လျားနေကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။3. သန့်စင်သော မီးမလောင်နိုင်သော သုံးပေါက် ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပေါက်ကွဲတတ်သော ဓာတ်ငွေ့နှင့် မီးလောင်လွယ်သော ဖုန်မှုန့်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက် သင့်လျော်သည်၊ ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဓာတ်ပုံမက်ထရစ် စွမ်းဆောင်ရည်အတွက် အထူးကောင်းမွန်သည်။4. အစွန်းအထင်းများ...
IW5130/LT စီးရီး အသေးစား ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော ဦးခေါင်း...
မော်ဒယ်၏ သက်ရောက်မှု အင်္ဂါရပ်များ 1. ဘေးကင်းရေး ပေါက်ကွဲခြင်း ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း- ပေါက်ကွဲနိုင်သော အကာအကွယ် မီးချောင်းများ ၊ မီးလောင်လွယ်ပြီး ပေါက်ကွဲလွယ်သော နေရာ အမျိုးမျိုးအတွက် လုံခြုံစွာ အသုံးပြုရန် သင့်လျော်ပါသည်။2. ထိရောက်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော- Solid-state light-free ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ LED အလင်းရင်းမြစ်၊ တောက်ပသောထိရောက်မှု၊ သက်တမ်း 100,000 နာရီအထိ။ဘက်ထရီသည် ပင်ကိုယ်အားဖြင့် ဘေးကင်းသော၊ စွမ်းအင်မြင့် ပိုလီမာလီသီယမ်ဘက်ထရီ၊ ဘေးကင်းမှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှု၊3. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် အဆင်ပြေသည်- လူ့ခေါင်းပတ်ဒီဇိုင်း၊ ခေါင်းစည်း ပျော့ပျောင်းသော၊
မော်ဒယ် သက်ရောက်မှု အင်္ဂါရပ်များ 1. လမ်းမီးများသည် ဆိုလာ မော်ဂျူးများ၊ အသိဉာဏ်ရှိသော လမ်းမီးခလုတ်များ၊ (မြှုပ်နှံထားသော) ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု မပါသော ဘက်ထရီများ၊ BAD63 ပေါက်ကွဲခြင်း ခံနိုင်သော မီးချောင်းများ၊ မီးတိုင်များနှင့် အခြား အစိတ်အပိုင်းများ ပါဝင်သည်။ဆိုလာ module များသည် အများအားဖြင့် DC12V၊ DC24 monocrystalline silicon plates သို့မဟုတ် polycrystalline silicon ဆိုလာဆဲလ်များကို စီးရီးနှင့်အပြိုင်ဖြစ်သည်။၎င်းတို့ကို tempered glass၊ EVA နှင့် TPT ဖြင့် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချိတ်ထားသည်။အလူမီနီယံအလွိုင်းဖရိန်အား အစွန်အဖျားပတ်လည်တွင် တပ်ဆင်ထားပြီး လေပြင်းနှင့် မိုးသီးများပါရှိ...
dYD စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ(LED) မီးချောင်း
Model Implication Features 1. အကာအရံအား မြင့်မားသော အလူမီနီယမ်သတ္တုစပ်ဖြင့် တစ်ကြိမ်တည်း ပုံသွင်းထားသည်။၎င်း၏ အပြင်ဘက်သည် အရှိန်ပြင်းပြင်းဖြင့် ပေါက်ကွဲပြီးနောက် ဖိအားမြင့်သော ပလပ်စတစ်ဖြင့် ပက်ဖြန်းထားသည်။အရံအတားတွင် အားသာချက်အချို့ရှိသည်- တင်းကျပ်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆပစ္စည်းများ၊ ကြီးမားသောခိုင်ခံ့မှု၊ ကောင်းမွန်သောပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောလုပ်ဆောင်ချက်များ။၎င်းတွင် ပလတ်စတစ်အမှုန့်များ၏ ခိုင်ခံ့သော ကပ်ငြိမှု နှင့် ပိုးမွှားတိုက်ဖျက်မှု စွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းမွန်ပါသည်။အပြင်ပန်းက သန့်ရှင်းပြီး လှတယ်။2. ၎င်းတွင်မူပိုင်ခွင့်ဖွဲ့စည်းပုံပါရှိပြီးပြန်လည်ဖြည့်စွက်နိုင်သည်...